December 2018 - Page 5 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
December 7, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo sargaal oo sare oo katirsan ciidamada milatariga Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dhowr kale oo askari ayaa lagu dilay qarax miinada wadada dhinaceeda lagu aasay Khamiistii oo ka dhacay koonfurta Muqdisho. Ilo-wareedyo ciidamada […]
December 5, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa sameeyay joogitaankiisii kowaad ee diblomaasiyadeed ee gudaha Soomaaliya ku dhawaad muddo 30 sanno ah kadib. Waaxda Arrimaha Dibada Mareykanka ayaa sheegtay in “arrintan taariikhiga ah” ay sabab u tahay horumarka ka […]
December 4, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in wariye uu si xun ugu dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho. Kabtan Maxamed Xuseen oo katirsan booliiska ayaa wakaalada wararka AP u sheegay in wariye […]
A Somali police officer says a journalist has been seriously wounded in a car bomb blast in Mogadishu. Capt. Mohamed Hussein says Ismail Sheikh Khalif, also a media rights activist, was hurt Tuesday when the […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Qaar katirsan musharixiinta madaxweynaha Puntland ayaa kasoo horjeestay guddiga xalinta khilaafaadka ee uu magacaabay Madaxweynuhu. Shir jaraaid oo ay ku qabteen Garoowe maanta oo Talaado ah, musharixiinta ayaa sheegay in xubnaha guddiga aysan […]
December 3, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ku dhawaaqay guddiga xalinta khilaafaadka baarlamaanka, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday madaxtooyada maanta oo Isniin ah. Magacyada guddiga: 1.Caaqil Cismaan Ismaaciil Barre 2.Maxamed Cabdikariim Maxamuud 3.Burhaan […]
December 2, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qarax gaari ayaa galabta oo Axad ah ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. Qaraxa oo ka dhacay isgoyska Sayidka ayaa lagu xiray gaari kaasoo uu ku dhintay hal qof […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ay duqeyn ku dileen sagaal maleeshiyo ah oo katirsan Al-Shabaab. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan ay soo saareen gelinkii dambe Sabtida ku sheegay in duqeyntu ay ka […]
December 1, 2018 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Agaasimihii Ciidamada Ammaanka Puntland ee PSF Asad Cusmaan Cabdullaahi ayaa iclaamiyay qorshihiisa uu ku rabo in uu u tartamo madaxweynenimada Puntland. Xaflad lagu qabtay magaalada Boosaaso maanta oo Sabti ah, Asad ayaa sheegay […]
Director of PSF announces bid for Puntland President
Bosaso-(Puntland Mirror) Director of Puntland Security Forces (PSF) Asad Osman Abdullahi has announced his bid to run for Puntland President. In a ceremony held in Bosaso town on Saturday, Asad said he would focus on […]
Garowe-(Puntland Mirror) Two men kidnapped by local men in Garowe last month have been released, traditional leader said on Tuesday. The two men are from Burco town of Somaliland and kidnapped by local men who [...]